မှော်ဆန်တဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်တွေကို ယုံပါသလား? ယုံတယ်ဆိုရင်တော့, အရမ်းကောင်းပါတယ် - ဒီမှာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်း ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေပါ. မယုံဘူးဆိုရင်တော့, ဒါဟာသင့်ရဲ့မယုံတတ်တဲ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်.
"စိတ်​ကူးအိပ်​မက်​များ အမှန်​တကယ်​ဖြစ်​လာပြီ" ဆိုတဲ့ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်ဟာ ဖောက်သည်တော်တွေအလွန်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, လစဉ်လတိုင်းလဲ ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ်! ဒီမှာကတော့ FBSရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့ရူးသွပ်စွာနဲ့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံထူးရှင်များပဲဖြစ်ပါတယ်:
• အီဂျစ်မှ Mohammed Ashrey
• အင်ဒိုနီးရှားမှ Merlyn Rebecca S
• မလေးရှားမှ Meet Wan Mer
လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာများအတွက်သာဆန္ဒပြုပါ: ရော့ခ်စတားတစ်ယောက် သင်အမြဲတမ်းဖြစ်လာချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်ဂစ်တာတစ်လက်၊ သင်အချစ်ဆုံးမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းက စက်ဘီးကိုဘယ်လိုစီးရမယ်ဆိုတာမသိသေးရင်တော့ စက်ဘီးတစ်စီး၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်ညီလေးအတွက် စကိတ်တစ်ခု.
အံ့သြဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ကြီးဖြစ်လာနေပါပြီ - သင့်ရဲ့ဘ၀ကိုလဲ အံ့သြပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.